БЕЗПЛАТНА e-книжна версия на Oromo език издание 6
Gooftaa Keenya isa Qajeelummaa Waaqayyoo ta'e ( II )
- Qajeelummaa Waaqayyoo akka ergaa gara warra Roomaa keessatti mul'ifame
Wangeelli bishaaniifi Hafuuraa Qajeelummaa Waaqayyoo ti.
Qajeelummaan Waaqayyoo qajeelummaa hojii namaattii adda. Qajeelummaan Waaqayyoo wangeela bishaaniifi Hafuuraa isa cuuphamuu fi fannoo Yesuus irratti hundaa'ee dha. Utuun yeroon jiruu amantiidhaan gara qajeelummaa Waaqayyootti haa deebinu.
Yesuus maaliif akka Yohaannis cuuphaan cuuphame hubatteetta? Utuu Yesuus Yohaannisiin hin cuuphamne ta'e silaa cubbuun keenya gara isaatti hin darbu ture. Yohaannis cuphaan nama hundumaa irra kan caalu, ergamaa isa Yesuusiin cuuphee cubbuu keenya hunda itti dabarsee dha.
Yesuus cubbuu keenya baachuuf cuuphamee gatii cubbuu keenyaa kaffaluuf fannoo irratti du'e. Kun hubannoo ani waa'ee diiga fannoo qofa isa jedhuufi waa'ee lammaffaa dhalachuu irratti qabaachaa ture hundumaa ni jijjiire. Egaa amma akka itti amantee fudhatuuf Waaqayyo qajeelummaan isaa maal akka si hubaachiisa. Eebba isaa hundaaf ani Waaqayyoon nan galateeffadha.
Dubbiin kitaaba kana keessaa dheebuu laphee keetii sii baasa. Bara ammaa kanatti kiristaanonni rakkoo cubbuu guyyaa-guyyaatti isaan mudatuu otoo hin hiikkatin adeemaa jiru. Qajeelummaan Waaqayyoo maal akka ta'e barteettaa? Kitaaba kana keessatti gaaffii kanaaf deebii ga'aa argattee akka ati itti amantu nan abdadha.
Qajeelummaan Waaqayyoo wangeela bishaaniifi Hafuuraa keessaan mul'ata. Haa ta'u malee, dubbiin gati jabeessi kun bara dheeraadhaaf geggeessitoota amantii kiristaanotaa jalaa dhokatee ture. Sababa kanaaf namoonni hedduun qajeelummaa mataa isaaniitti hirkatanii isumaan of jajuu isaaniitiin qajeelummaa isa Waaqayyo kennu irraa kaataniiru. Kanaafuu, barsiisni hundee amantii namoonni kaa'an, hiika kan hin laanne akka waan qajeelummaa Waaqayyoo qabaataniitti lakkaa'amee fudhatamaa tureera.
Barsiisni hundee amantii filannoo duraan dursaa, barsiisni namni amane tokko altakkaa qajeelaa fi cubbamaa ta'a jedhu (Doctrine of Justification) fi namni suuta-suuta qulqullummaa argataa adeema (Incremental Sanctification) jedhu joonja'ummaa fi duwwaa ta'uu lubbuu namaatti fidee jira. Haa ta'u iyyuu malee, kiristaanonni Waaqayyoon beekanii, qajeelummaa isaa hubatanii amantii isaanii mirkaneeffachuu isaan barbaachisa.
Kitaabni,"Gooftaa keenya isa Qajeelummaa Waaqayyoo ta'e" jedhu kun hubannoo guddaa namaa kennee gara nagaatti nama geessa. Barreessan kitaabichaa eebba qajeelummaa Waaqayyoo keessaa dhufu akka ati qabaatu barbaada. Eebbi Waaqayyoo si faana haa ta'u!
Oromo издание 6